စွဲခြင်းနှင့်စွဲခြင်းအန္တရာယ်များရှိ Cortisol ၏လျှို့ဝှက်ချက်ပုံစံများ (၂၀၀၆) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
int J ကို Psychophysiol ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2008 ဖေဖော်ဝါရီ 27 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
int J ကို Psychophysiol ။ 2006 မတ်လ; 59 (3): 195-202 ။
2006 ဇန်နဝါရီ 24 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.ijpsycho.2005.10.007
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် int J ကို Psychophysiol
အရက်သို့မဟုတ်နီကိုတင်းကိုစွဲခြင်းသည် ဦး နှောက်၏စိတ်လှုံ့ဆော်မှုစနစ်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပြောင်းလဲသွားသည်။ အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-adrenocortical (HPA) ဝင်ရိုး၏ပြောင်းလဲလည်ပတ်မှုစွဲနှင့်စွဲဖို့စွဲနှင့်အားနည်းချက်နှင့်အတူစိတ်ခွန်အားနိုးအပြောင်းအလဲများကို၏သဘောသဘာဝသဲလွန်စကိုင်ထားလိမ့်မည်။ အရက်နှင့်နီကိုတင်းတို့သည်အနည်းဆုံး HPA လုပ်ဆောင်မှုသုံးမျိုးကိုပြသသည်။ ဒီပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်စားသုံးခြင်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုကဲ့သို့သော cortisol တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူတို့၏မြဲမြံသောအသုံးပြုမှုသည် HPA ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးနောက်မှီခိုခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခြင်းအတွက်အန္တရာယ်မှာဖိစီးမှုအမျိုးမျိုးရှိသော cortisol ဓာတ်ပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ HPA ကို hypothalamus တွင်နေ့နှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်အချက်ပြခြင်းဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ သို့သော်စူးရှသောစိတ်ခံစားမှုအခြေအနေများတွင်၎င်း၏စည်းမျဉ်းကို limbic system နှင့် prefrontal cortex မှအချက်ပြခြင်းဖြင့်အစားထိုးသည်။ ဤအပေါ်မှအောက်သို့ကျရောက်နေသောအဖွဲ့အစည်းသည် HPA အားတွန်းအားပေးသောဖြစ်စဉ်များကိုထင်ဟပ်စေသည့်သွင်းအားစုများကိုတုံ့ပြန်မှုပေးသည်။ HPA သည်စွဲလမ်းမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောသိမြင်မှု၊ စိတ်ခံစားမှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသဘောထားများကွဲပြားနိုင်သည့်လူများအားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒလေ့လာမှုအတွက်အသုံးဝင်သောစနစ်ဖြစ်သည်။ နာတာရှည်နှင့်အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းနှင့်နီကိုတင်းဓာတ်တို့သည်ဤတိုကျရိုကျ - limbic အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်အရက်သမားများနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်တွေ့ရသော HPA တုန့်ပြန်မှုကွဲပြားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုရှိသောမိဘများ၏သားသမီးများလေ့လာမှုတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း HPA နှင့် front-limbic အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုများတွင်ယခင်ပြောင်းလဲမှုများသည်စွဲလမ်းမှုလက္ခဏာကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ HPA လုပ်ဆောင်ချက်၊ စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်မှုနှင့်စွဲလမ်းမှုတို့အကြားဆက်နွှယ်သောသုတေသနကို ဦး နှောက်၏စိတ်ခွန်အားနိုးစေသောစနစ်များသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုအတွက်အန္တရာယ်ကိုမည်သို့ပံ့ပိုးသည်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေနိုင်သည်။
keywords: Hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး, စွဲ, နီကိုတင်း, အရက်, cortisol, စိတ်ဖိစီးမှု
အဆိုပါ hypothalamus cortisol ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထိန်းချုပ်; ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအားလုံးဆဲလ်များ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိန်းညှိသောဘဝအတွက်လိုအပ်သောဟော်မုန်း။ cortisol ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုစိတ်ဖိစီးမှုကြိမ်အတွင်း limbic စနစ်နှင့်ယင်း prefrontal cortex ကနေသွင်းအားစုမှ acute အထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ limbic စနစ်နှင့်ယင်း hypothalamic-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုး (HPA) အကြားဒါဟာ motivationally သက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးကအနည်းဆုံးသုံးနည်းလမ်းအရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်။ အရက်၏စားသုံးမိကာစူးရှသော cortisol တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အရက်၏ရေရှည်အလွဲသုံးစားမှု cortisol ၏ Basal နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-reactive Secret dysregulates ။ အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇ propensity စိတ်ဖိစီးမှုတစ်လျှော့ချ HPA တုံ့ပြန်မှုဖြင့်လိုက်ပါသွားနိုင်ပါသည်။ ဤစာတမ်းသည်နီကိုတင်းနှင့်အခြားစှဲဖို့ရည်ညွှန်းနှင့်အတူအရက်နှင့် ဆက်စပ်. အတွက် HPA ရဲ့ Basal နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-reactive ထိန်းချုပ်မှုသုံးသပ်ပြီး။
1.1 ။ အဆိုပါ HPA ၏ Diurnal နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related စည်းမျဉ်း
cortisol လျှို့ဝှက်ချက် HPA ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်။ ဤသည်လှုပ်ရှားမှု diurnal နှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်သွင်းအားစုများကအဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု (ကမောင်းနှင်နေသည်de Kloet နှင့် Reul, 1987; Linkowski et al ။ , 1993) ။ Cortisol ၏ basal (သို့) နေ့စဉ်ထုတ်လွှတ်မှု၊ သဖန်းသီး။ 1နိုးထ၏အချိန်အကြောင်းကိုနံနက်ယံ၌, ထိပ်နှင့်အိပ်စက်ခြင်းသံသရာ၏ပထမဦးဆုံးဝက်ကာလအတွင်းနေ့စဉ်နိမ့်ဆုံးအောင်မြင်ရန်ဖို့နှိုးနာရီမှတဆင့်တဖြည်းဖြည်းငြင်းပယ် (Czeisler et al ။ , 1976) ။ Cortisol ၏နံနက်ခင်းပေါက်ကွဲမှုသည် hypothalamus ၏ suprachiasmatic nucleus တွင်နာရီမျိုးဗီဇများ၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်မောင်းနှင်သည်။ paraventricular nucleus (PVN) သို့အာရုံကြောအချက်ပြမှုကိုစတင်သည်။Linkowski et al ။ , 1993) ။ အထူးပြု PVN အာရုံခံကဤအချက်ပြတုံ့ပြန်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ axon သူတို့ကစနစ်တကျလည်ပတ်သို့ adrenocorticotropic ဟော်မုန်း (ACTH) secrete ဖို့ anterior pituitary ဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပေါ်တယ်စောင်ရေသို့ CRF လွှတ်ပေးရန်ရှိရာ hypothalamus ၏ပျမ်းမျှထူးမြတ်သောအတွက်ရပ်ဆိုင်း။ ACTH ကစောင်ရေသို့ cortisol များ၏ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိတိုးမြှင့်ဖို့ adrenal cortex ဖြစ်ပေါ်စေသည်ရှိရာ adrenal gland မှပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ဤသည် diurnal ပုံစံအသွေးသည်ဂလူးကို့စအဆင့်ဆင့်စပ်လျဉ်းပေါ်ထွက်လာသောဇီဝဖြစ်စဉ်သွင်းအားစု (အားဖြင့်တစ်နေ့လျှင်တစ်လျှောက်လုံး modulated ဖြစ်ပါတယ်ဗန် Cauter et al ။ , 1992) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ cortisol (က, pituitary မှာအနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်အားထုတ်ခြင်းဖြင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထိန်းညှိရန်ကူညီပေးသည် hypothalamus နှင့် hippocampusBradbury et al ။ , 1994) ။ ဤအအကြောင်းရင်းများ, ကြှနျုပျတို့ diurnal နှင့်သဘာဝဇီဝဖြစ်စဉ်အဖြစ် HPA စည်းမျဉ်း၏ဤ Basal ပုံစံကိုကိုးကားပါ။ ဒီ diurnal Secret ပုံစံ၏နာတာရှည်နှောင့်အယှက်ဒီစနစ်အတွက်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအဆင့်ဆင့်မှာရောဂါရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။
လူမှာ 24-ဇပလာစမာ cortisol လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကွေး။ လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအထွတ်အထိပ်နိုးထ၏အချိန်အနီးဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းသံသရာ၏ပထမဦးဆုံးဝက်ကာလအတွင်းတစ်ဦး nadir ရှိပါတယ်။ မိုင်းနားမြင့်တက်မွန်းတည့်နှင့်အစောပိုင်းညဦးယံ၌အစားအစာများနှင့် ပတ်သက်. တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ပညာရှင် Hans Selye ၏လုပျငနျးကတည်းကကျနော်တို့ HPA သက်ရှိများ၏သုခချမ်းသာကိုစိန်ခေါ်ကြောင်းဖိအား (မှအလုံးစုံတုံ့ပြန်ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့ကြပါပြီSelye, 1936) ။ ဖိအားနှစ်ခုအဓိကအတန်း, ထိုကဲ့သို့သောသွေးလွန်အဖြစ်ကိုယ်ထင်ရှားနှောင့်အယှက်အတွက်အစပြုသောသူတို့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအသားစားခြင်းဖြင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုအဖြစ်ပြင်ပခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ်အစပြုသောသူတို့ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ သူတို့ရဲ့သွင်းအားစုကိုခန္ဓာကိုယ်ကနေဦးနှောက်မှတက်သောကွောငျ့ယခင် Bottom-Up ဖိအားထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ ဆနျ့ကငျြပြင်ပခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲသဘောသဘာဝအတွက်ထိပ်တန်း-down ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ယူဆနိုင်ပါတယ်; သူတို့ (ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကရိပ်မိပုံ၏စိတ်ဖိစီးမှုဝင်ရိုးကိုသက်ဝင်နှင့်အနက်လာဇရုကိုနှင့် Folkman, 1984; Lovallo နှင့် Gerin, 2003) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားကွောငျ့, ငါတို့သည်ဤလောကအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေရှည်အစီအစဉ်များနှင့်မျှော်လင့်ချက်များ ( ဆက်စပ်. ၌သူတို့ကိုအနက်ကိုဘော်ပြမည်သို့သူတို့ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရရှိလာဇရုကိုနှင့် Folkman, 1984) ။ ဒါဟာ cortisol ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင် HPA activation ၏အရင်းအမြစ်ဟာ hypothalamus ဖို့ limbic စနစ်နှင့် prefrontal cortex ကနေဆက်သွယ်မှုပါဝင်ရမည်ဟုအကြံပြု, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲစေနိုင်ပြီး acute အတော်လေးတုံ့ပြန်မှုကြောင်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုမှ cortisol တုံ့ပြန်မှု၏ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှု cortisol အဆိုပါ hypothalamus အထက်တွင် receptors တစ်ကျယ်ပြန့်မှုစနစ်ရှိပါတယ်သောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ဤ hippocampus, အ limbic စနစ်, နှင့် prefrontal cortex (တှငျတှေ့နေကြMcEwen et al ။ , 1968; Sanchez et al ။ , 2000) ။ ဤအ receptors များ၏ဖြန့်ဖြူးပိုမိုမြင့်မားသော ဦး နှောက်စင်တာများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကာလအတွင်းအခန်းကဏ္ play နှင့် HPA ၏တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်စောဒကတက်သည်။ တကယ်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခရောက်သည့်ကာလများ၌ cortisol ၏နေ့စဉ်ပုံစံသည်ခြေလက်အင်္ဂါစနစ်မှဖြစ်ပေါ်လာသော hypothalamus ကိုအချက်ပြခြင်းဖြင့်အစားထိုးသည်။ အဆိုပါအချက်ပြမှုများ amygdala နှင့် stria terminalis ၏အိပ်ရာအရေးပါသော, အခွအေနေနှင့်ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုများက activated နေကြသည်နှင့်ရှင်သန်မှုတန်ဖိုးကိုရှိခြင်းသတင်းအချက်အလက်သယ်ဆောင်သောအဆောက်အ ဦ များ (Amar et al ။ , 1992; Halgren, 1992; LeDoux, 1993) ။ အဆိုပါ amygdala ထို့ကြောင့် (innate ဖို့ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ရှောင်ရှားခြင်းတုံ့ပြန်မှုကိုထုတ်ပေးတဲ့အာရုံကြောကွန်ယက်၏အလယ်ဗဟိုမှာရပ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုသင်ယူRolls နှင့် Stringer, 2001) ။ အဆိုပါ amygdala နှင့်အိပ်ရာအရေးပါထံမှအကျိုးရလဒ်များ (အလှည့်အတွက် prefrontal cortex နှင့်အတူကျယ်ပြန့်ဆက်သွယ်ဖို့သောထိုကဲ့သို့သောနျူကလိယ accumbens အဖြစ်အနီးအနားရှိအဆောက်အဦများနှင့်အတူအပြန်အလှန်Carboni et al ။ , 2000; Figueiredo et al ။ , 2003; Herman et al ။ , 2003) ။ အိပ်ရာအရေးပါလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခု HPA တုံ့ပြန်မှု generate သော PVN မှမူလတန်းသွင်းအားစုကိုပေး။ ဤရွေ့ကားတိုကျရိုကျ-limbic ဖြစ်စဉ်များထို့ကြောင့် (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ cortisol တုံ့ပြန်မှု generate နိုင်သည့်မှတဆင့် neurophysiological ယန္တရားဖွဲ့စည်းLovallo နှင့်သောမတ်စ်, 2000) ။ ဤရွေ့ကားသြဇာလွှမ်းမိုးမှု (norepinephrine အဆိုပါနှောက် cortex သက်ဝင်စေဖို့ brainstem အတွက် locus ceruleus ကနေတက်ကြောင်းသွင်းအားစုများနှင့် limbic စနစ်ဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု၏ကာလအတွင်းမှာလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းHarris ကနှင့် Aston-ဂျုံးစ်, 1994; Pacak et al ။ , 1995) ။ စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုနောက်ထပ်နှောက် cortex နဲ့ limbic စနစ် (တှငျတှေ့ CRF-secreting အာရုံခံတစ်ခုကျယ်ပြန့်စနစ်အနေဖြင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကိုဖြတ်ပြီးပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်Petrusz နှင့် Merchenthaler, 1992) ။ သောကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏တိုကျရိုကျ-limbic မူရင်း, စိတ်ဖိစီးမှုဖို့စူးရှသော cortisol တုံ့ပြန်မူကွဲသူတို့၏အပြုအမူကိုကျော်သူတို့ရဲ့ limbic system ကို reactivity ကိုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအကြားခြားနားချက်များကိုဖျောပွနိုငျသညျ။
အဆိုပါအထက်ပါပု HPA ထိုကဲ့သို့သောကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းမှအစားအစာ, အာဟာရစားသုံးမိ, ဇီဝဖြစ်စဉ်စည်းမျဉ်းများနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများရှာကြံအဖြစ်အခြေခံအကျဆုံးစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များမှတုံ့ပြန်မှုကြောင်းဖော်ပြသည်။ အရက်, နီကိုတင်းနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများမှစွဲသေချာပေါက်သည်ဤဆက်ဆံရေး၏ reworking ပါဝငျသညျ။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်နောက်ခံဦးနှောက်ယန္တရားများကိုနားလည်အတွက်အဓိကအရေးပါမှုဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်ပြောင်းလဲ HPA လုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်ရှုနိုငျသညျ။
2 ။ အဆိုပါစှဲ၏အင်္ဂါရပ်များ
အရက်စွဲခြင်းသည်လူတစ် ဦး ၏လူမှုရေးအရပိတ်ဆို့ထားသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းလာခြင်းကိုထင်ဟပ်စေသောလူမှုရေးအရသတ်မှတ်ထားသောတည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်။American_Psychiatric_Association, 1994) ။ အရက်နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုနှင့်အငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိ, နီကိုတင်းစွဲလမ်းပါဝင်နိုင်: (1) လက်ခံခဲ့သည်စံချိန်စံညွှန်းသို့မဟုတ် unsanctioned အသုံးပြုမှုကိုကျော်လွန်သုံးတတ်၏ ခါတိုင်းလိုလှုပ်ရှားမှုများ (2) forsaking; (3) မိသားစုအသက်တာ၏နှောင့်အယှက်, အလုပ်အကိုင်နှင့်ဥပဒေရေးရာအခက်အခဲများ; ထပ်ခါတလဲလဲကြိုးစားမှုသော်လည်းလှုပ်ရှားမှုပြုခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်တန့်ရန် (4) နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, အသုံးပြုမှုရပ်စဲအပေါ်နှင့် (5) ရုပ်သိမ်းရေးရောဂါလက္ခဏာတွေ။ ဘုံအားနည်းချက်များအမျိုးမျိုးသောစှဲအခြေခံကြောင်းအဆိုပါဖြစ်နိုင်ခြေကို (comorbid အလွဲသုံးစားမှု၏မြင့်နှုန်းထားများအားဖြင့်ပံ့ပိုးဘန်းနှင့် Teesson, 2002; Tapert et al ။ , 2002) ။ မျိုးစုံစွဲလမ်း၏ဘုံဖြစ်ပျက်မှုကိုလည်းဘုံအားနည်းချက်များတစုံတယောက်သောသူသည်စွဲအခြေခံစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
၃။ စွဲခြင်းနှင့် ဦး နှောက်၏စိတ်ခွန်အားနိုးမှုစနစ်များ
စွဲလမ်းမှုကိုအကြားဆင်တူရိုးမှား၏ထွန်းသစ်စမြင်ကွင်းကိုစှဲမျိုးရိုးဗီဇပါဝင်ပတ်သက်နေနှင့်ဦးနှောက်အတွင်းစိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များမြားတှငျပွောငျးလဲဝယ်ယူကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းသုတေသနပြုခြင်းဖြင့်ရာထူးတိုးဖြစ်ပါတယ်။ သြဇာစာတမ်းများတစ်စီးရီးများတွင်ဂျော့ခ်ျ Koob နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဆုလာဘ်ယန္တရားများ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများမှကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကြွက်ဗီဇအတွက်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်းပြသသည်။ ဤသည် dysregulation (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့အချိန်ကြာမြင့်စွာ low-level ထိတွေ့မှုအားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားနေပါတယ်Ahmed ကနှင့် Koob, 1998; Koob, 2003; Koob နှင့် Bloom, 1988; Koob et al ။ , 1994) ။ Koob ၏စကားများအရအလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်မှီခိုလာကြသူများ၌ ဦး နှောက်၏စိတ်ခံစားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာယန္တရားသည်“ ပြန်ပေးဆွဲခံရသည်”Koob နှင့် Le Moal, 1997).
တခြားလေ့လာမှု (မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်စွဲစပ်လျဉ်း HPA စိတ်ဖိစီးမှု Response ၏နေရာအနှံ့ကိုပြောင်းလဲပြသValdez et al ။ , 2003) ။ ဤရွေ့ကားကိုပြောင်းလဲ dopaminergic နှင့် CNS function ကို၏ opiodergic စည်းမျဉ်း (ပြောင်းလဲမှုများပါဝင်ပတ်သက်နေOswald နှင့် Wand, 2004) ။ အများအပြားကတွေ့ရှိချက်များကိုဤအချက်များသရုပျဖျော။ ပထမဦးစွာနဲ့ဗွေဆော်, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးစူးရှသောအုပ်ချုပ်ရေးကိုမကြာခဏ (တိုးလာ cortisol လျှို့ဝှက်ချက်များကိုမှဦးဆောင်ကာ HPA တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်Broadbear et al ။ , 2004; Mendelson et al ။ , 1971) ။ ကြွက်များတွင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူကျလာသော၎င်းတို့၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်စွမ်းရည်အားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဖြစ်အမူအကျင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုတ်ခွာနှစ်ဦးစလုံး (၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုအတွက်အပြန်အလှန်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်Breese et al ။ , 2004) ။ ထို့အပြင်လျင်မြန်စွာမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ (ကစနစ်တကျစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု precipitating, ကျယ်ပြန့်ဦးနှောက်ဒေသများတွင် CRF ၏ဖြန့်ချိခြင်းများဖြစ်ပေါ်Rodriguez က de Fonseca et al ။ , 1997) ။ သူ့ဟာသူစိတ်ဖိစီးမှု (လူ့ချိုးဖောက်ကင်းမတရားသောတိုးပွါးSinha et al ။ , 2000), နှင့်ကတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးပွါး (Piazza နှင့် Le Moal, 1998) ။ CNS glucocorticoid receptors တွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုလျော့ကျလာလည်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်လျှော့ချရေးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဖြစ်သောကြောင့်အလှည့်၌, Self-အုပ်ချုပ်ရေး (ဗဟိုအာရုံကြောစနစ် (CNS) ကို cortisol တုံ့ပြန်ချက်ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အာရုံကြောအချက်ပြပေါ်တွင်မူတည်ပုံDeroche-Gamonet et al ။ , 2003) ။ acute cortisol အုပ်ချုပ်ရေး (ကိုကင်း-မှီခိုလူသားတွေအတွက်တဏှာပြွီးElman et al ။ , 2003), နောက်တဖန်တိုးမြှင်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုအတွက် HPA တစ်ခုတက်ကြွအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း။ ဤအချိန်တွင်သူကအခိုင်အမာ Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်မူးယစ်ဆေးမတရားသောရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိထူထောင်မဟုတ်ပါ: (1) သူတို့အဘို့တာဝန်ရှိကြောင်း CNS မှ cortisol အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်အပေါ်ပိုပြီးမူတည်လျှင်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု, သို့မဟုတ် (2) ၏မျိုးဆက်နှင့်အတူဆက်စပ် CRF activation ဒီတုံ့ပြန်ချက်၏ဇာတ်ကောင်ကြောင့် glucocorticoid အဲဒီ receptor မူကွဲမှပြောင်းလဲလျှင်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု, သို့မဟုတ် (3) ၏ကြာချိန်နှင့်ပြင်းထန်မှုကိုထိန်းညှိ။
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအကြားအပြန်အလှန်မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့်စားသုံးမှုစဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်သောတူညီ dopamine လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အများအပြားနှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စူးရှသောအုပ်ချုပ်ရေးနှစ်ဦးစလုံးဟာ brainstem ၏ ventral tegmental ဧရိယာ (ထဲမှ dopamine အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တိုးမြှင့်Saal et al ။ , 2003) ။ ဒီစိတ်လှုပ်ရှားပေါ်တွင်မူးယစ်သွေးဆောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတားဆီးမထားဘူးသော်လည်း Glucocorticoid အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, dopamine အာရုံခံဆဲလျစိတ်လှုပ်ရှား၏စိတ်ဖိစီးမှု-တိုးမြှင့်ကာကွယ်ပေးသည်။ ဤသည်အလွဲသုံးစားမှုစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေမှာသူတို့ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများအစပျိုးစေခြင်းငှါအကြံပြုပေမယ့် Self-အုပ်ချုပ်ရေး (တစ်ဘုံလမ်းကြောင်းအဖြစ်ဦးနှောက် dopamine စနစ်များအပေါ်သူတို့နှစ်ဦးစလုံးလုပ်ရပ်ကြောင့်Saal et al ။ , 2003).
အထက်ပါအထောက်အထားများကိုစိတ်ဖိစီးမှုမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့် HPA တုံ့ပြန်မှုဖို့ limbic system ကိုတုန့်ပြန်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု, စွဲအားနည်းချက်များနှင့်လူသားတွေအတွက် relapse များအတွက်အလားအလာနှင့် ပတ်သက်. အကျိုးစီးပွားနှစ်ခုလုံးဖြစ်ကြောင်း။ ညွှန်ပြ ဒီဦးနှောက်-based မော်ဒယ်နှင့်အတူတသမတ်တည်း, မိသားစုများအတွက် run ဖို့စွဲကျရောက်နေတဲ့များအတွက်စိတ်သဘောထား (ဒီတိုးမြှင့်အန္တရာယ်ဆွေးနွေးသည့်မျိုးဗီဇစွဲ၏အကျိုးဆက်အတွက်ပြောင်းလဲဖြစ်ကြောင်းအတူတူပင်ဦးနှောက်စနစ်များကိုထိခိုက်စေသည်ဟုအကြံပြုရှိ၏ပုံတူပွားခြင်း, 1987; ပုံတူပွားခြင်း et al ။ , 1981) ။ အောက်မှာဆွေးနွေးလေ့လာရေးရက်တစ်မိသားစုသမိုင်းနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ရပ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုပံ့ပိုးသော dopaminergic လှုပ်ရှားမှုအကဲဖြတ်များအတွက်လိုအပ်သောတိုကျရိုကျ-limbic ဖြစ်စဉ်များနှစ်ဦးစလုံးထိခိုက်စေသောအလယ်ပိုင်း opioid function ကိုပြောင်းလဲခဲ့ကြခြင်းအလိုငှါဖြစ်နိုင်ခြေဖော်ပြသည်။
4 ။ စွဲလမ်းများအတွက်မြင့်မားသောအန္တရာယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် cortisol စည်းမျဉ်း
လက်ရှိနှင့်အတိတ်စှဲစပ်လျဉ်းအဖြစ်တစ်ဦးအပြုသဘောမိသားစုသမိုင်း၏သီလအားဖြင့်စွဲလမ်းများအတွက်အန္တရာယ်အတွက် HPA ဝင်ရိုးတုန့်ပြန်မြားတှငျပွောငျးလဲအကြံပြုကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများအများအပြားလိုင်းများရှိပါသည်။ HPA function ကိုနှင့်အရက်၏အသုံးပြုမှု, နီကိုတင်းနှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများအကြားအပြန်အလှန်အဘို့သက်သေအထောက်အထား (အားလုံးထိုကဲ့သို့သောတ္ထုများ pharmacologic activation ကြောင့်စူးရှ HPA တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေဆိုတဲ့အချက်ကိုအတူစတင်Rivier, 1996) ။ အပြန်အလှန်၏ဒုတိယအချက်ကတော့ HPA plausibly ထိုအရာဝတ္ထုများ၏အမြဲ, High-level ကိုအသုံးပြုမှုကို (အားဖြင့် dysregulated စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်Adinoff နှင့် Risher-ပန်းပွင့်, 1991) ။ တစ်မိသားစုသမိုင်း၏သီလအားဖြင့်အလွဲသုံးစားမှုများအတွက်အန္တရာယ်မှာဟောင်းတဦးအချိုးဖောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် HPA ၏ပြောင်းလဲ reactivity ကို (ထို့ကြောင့်လက်ရှိအလွဲသုံးစားမှု၏မရှိခြင်းအတွက်ထင်ရှားကျော်ကြားသော, နောက်ခံ psychobiological ဝိသေသလက္ခဏာများထံမှရယူထားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်Adinoff et al ။ , 2005b; ရှငျဘုရငျ et al ။ , 2002).
အတွေးဒီမျဉ်းကြောင်း (စူးရှသောအရက်အုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များတွင် HPA function ကိုတိုးပွါးကြောင်းတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူစတင်Rivier et al ။ , 1984) နှင့်လူသားမြားသညျ (Mendelson et al ။ , 1971, 1966) ။ အရက်, နီကိုတင်းနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်မှီခိုပုဂ္ဂိုလ်များ (မိုးသည်းထန်စွာစားသုံးမှု၏ကာလအတွင်း HPA ၏နာတာရှည် activation ကိုပြစေခြင်းငှါSteptoe နှင့် Ussher, 2006; Wand နှင့် Dobs, 1991) နှင့်နောက်မှရက်သတ္တပတ်မှနေ့ရက်ကာလအဘို့ပုံမှန် diurnal Secret ပုံစံ၏ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူရုပ်သိမ်းရေး, စဉ်အတွင်း (Adinoff နှင့် Risher-ပန်းပွင့်, 1991) ။ abstinence ထိန်းသိမ်းထားပြုလုပ်လျှင်ပုံမှန်ထက် diurnal ပုံစံကိုပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ အရက်သမား (abstinence ၏အကြောင်းကိုတဦးတည်းမှလေးပတ်ကြာမှာ diurnal cortisol လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုအတော်လေးသာမန်ပုံစံပြန်လည်Adinoff et al ။ , 2005a,b; Iranmanesh et al ။ , 1989) ။ သို့သော် HPA စည်းမျဉ်းကတော့ diurnal ပုံစံပြန်လည်ကောင်းမွန်ထားပါတယ်ပင်ပြီးနောက်လုံးဝပုံမှန်မဖွစျနိုငျသညျ။ Adinoff abstinent အရက်သမား CRF အားဖြင့် HPA ဆွဖို့လစ်လပ် cortisol တုံ့ပြန်မှု (ရှိသည်သတင်းပို့Adinoff et al ။ , 2005a,b).
ဒီတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ, abstinent အရက်သမား (အနည်းဆုံး4ရက်သတ္တပတ် postwithdrawal များအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားအပေါ်တုံး cortisol တုံ့ပြန်မှုများဘာနာဒီ et al ။ , 1996; Errico et al ။ , 1993; Lovallo et al ။ , 2000; Margraf et al ။ , 1967) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေမှာတော့ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်လူနာထို့ကြောင့်တုံး Response ၏အကြောင်းတရားများအဖြစ် differential ကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသို့မဟုတ်စိတ်ဓါတ်များတုံ့ပြန်မှုထွက်အာဏာရသည်ဖိအားထိတွေ့တုန့်ပြန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများတန်းတူပမာဏကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီအမျိုးအစားကတခြားလေ့လာမှုတွေ (cortisol တုံ့ပြန်မှု 3,4-methylenedioxymethamphetamine ( 'ecstasy') ၏ abstinent အသုံးပြုသူများသည်အများပြည်သူစကားပြောစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချဖြစ်ကြောင်းသဘောတူညီချက်လည်းရှိပါတယ်Gerra et al ။ , 2003b) နှင့် abstinent ဘိန်းဖြူစွဲထဲမှာဓာတ်ပုံတွေများကသွေးဆောင်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုမှ (Gerra et al ။ , 2003a) ။ Abstinent ဘိန်းဖြူစွဲလည်း (ကရန်လိုမုန်းတီးမှု-inducing ဂိမ်းကာလအတွင်း cortisol တုံ့ပြန်မှုလျှော့ချခဲ့သည်Gerra et al ။ , 2004) ။ ဒါဟာ abstinent အရက်သမား, ဘိန်းဖြူစွဲနှင့် ecstasy အသုံးပြုသူများအားလုံးအမူအကျင့်စိတ်ဖိစီးမှုတစ် persistent hyporesponsiveness ပြ induction ကိုထိခိုက် related ကြောင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်စုပေါင်းထားတဲ့မြင့်မားသောအလွဲသုံးစားမှုအလားအလာနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် hypothalamus ဖို့ခါတိုင်းလို limbic-system ကိုသွင်းအားစုများ၏ဇွဲနှောင့်အယှက်မှထောက်ပြတာပါ။ ဒီလိုလူနာအရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏တစ်ကြာရှည်သမိုင်းခဲ့သောကြောင့်သူတို့ရဲ့ cortisol တုံ့ပြန်မှုလိုငွေပြမှုအရက်သောက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်လျှင် HPA တုံ့ပြန်မှုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, ဒါမှမဟုတ် limbic စနစ်၏ preexisting ကိုပြောင်းလဲဖို့တုန့်ပြန်လိုငွေပြမှုမှတ်လျှင် recover မယ်ဆိုရင်ကမရှင်းလင်းဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ HPA ထိန်းချုပ်။
abstinent အရက်သမားတစ်ဦးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာရှုထောင့်ကိုထောက်ပံ့ပေး (Munro et al ။ , 2005) ။ အလားတူ ACTH နဲ့ Cortisol တုံ့ပြန်မှုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့် 3.5 နှစ်ပေါင်းပျမ်းမျှအဘို့အ abstinent အရက်သမားတွင်တွေ့မြင်နှင့် 17 နှစ်အထိကျအထိခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာလွှတ်တွင်ဤအရက်သမား, စိတ်ကျရောဂါသူတို့ရဲ့သတင်းပေးပို့ရောဂါလက္ခဏာတွေထိန်းချုပ်မှုကနေအရက်သမားအများစုလေ့လာမှုများအနေဖြင့်မတူကြောင်းလက္ခဏာကွဲပြားမဖြစ်ကောင်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအရက်သမားကြာရှည် abstinence နှင့်အတူ HPA တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုသာမန်အဆင့်အထိပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်တစ်လျှောက်တွင်ပုံမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဟာချက်ချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ comorbidity သူတို့ရဲ့မရှိခြင်းသူတို့လျော့နည်းနေတဲ့ hyporesponsive HPA ဝင်ရိုးနှင့်ဆက်စပ်သောအလယ်တန်းဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ညွှန်ပြလျှင် ။ သို့သော်တရားမဝင်သောရလဒ်များအရက်လူဦးရေအတွင်းပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော၏ဖြစ်နိုင်သောသတင်းရင်းမြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမေးခွန်းတွေတင်ပြထားတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအသစ်အဆန်းရှာအဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုမှ HPA တုံ့ပြန်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲနှင့် opioid စိန်ခေါ်မှုရန်, comorbid စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ် externalizing သဘောထားတွေနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါ, (Oswald et al ။ , 2004) နှင့်အနိမ့်လူပေါင်းကောင်းသော (Sorocco et al ။ , 2006) ။ ဒီအစွဲစပ်လျဉ်း HPA hyporeactivity ၏အကြောင်းတရားများအပေါ်အနာဂတ်အလုပျအတှကျအသုံးဝငျနညျးလမျးအကြံပြုထားသည်။
5 ။ ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ cortisol reactivity ကိုနှင့်စွဲပြင်းထန်မှု
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်အတွက်တုံး HPA reactivity ကိုဖေါ်ပြခြင်းအဆိုပါလေ့လာမှု reactivity ကိုခြားနားချက်စွဲ၏အကျိုးဆက်သို့မဟုတ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဝိသေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုတင်ပြထားတယ်။ ကန့်သတ်, ဒါပေမယ့်ပေးသော, သက်သေအထောက်အထားတစ်ခု hyporesponsive HPA နောက်ခံစွဲလမ်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ပြင်းထန်မှုအချက်ပြလိုက်ခြင်းကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကုသမှုအရက်သမား (သူတို့လူထုစကားပြောစိတ်ဖိစီးမှုမှသေးငယ် cortisol တုံ့ပြန်မှုရှိတဲ့အခါပိုပြီးလျှင်မြန်စွာပြန်သွားကြသည်လေ့Junghanns et al ။ , 2003) သို့မဟုတ်တစ် cue ထိတွေ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထဲမှာအရက်တွေကိုတုန့်ပြန် (Junghanns et al ။ , 2005) ။ ဤစာစောင်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည် abstinent ဆေးလိပ်သောက်အပေါ်လေ့လာမှုများ,, (သေးငယ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှု cortisol တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာ သာ. ကြီးမြတ် relapse အလားအလာအချက်ပြကြောင်းပြသal'Absi, 2006) ။ Relapse လည်း ( သာ. ကြီးမြတ် relapse အလားအလာနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အတော်လေးနိမ့်လုပ်သူများ cortisol ပမာဏညွှန်း, ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းမှရပ်စဲပြီးနောက် cortisol လျှော့ချရေး၏ပြင်းအားနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်Steptoe နှင့် Ussher, 2006).
6 ။ Opioid ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, cortisol တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အရက်တစ်အပြုသဘောမိသားစုသမိုင်း
လေ့လာရေးအေးဂျင့်များ, naloxone နှင့် naltrexone ပိတ်ဆို့ခြင်းဟာ opioid သုံးပြီးအရက်သမားအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာသည့်တုံး HPA တုန့်ပြန်၏သဘောသဘာဝသို့ထိုးထွင်းသိမြင်သည်နှင့်သူတို့ထိုကဲ့သို့သောလိုငွေပြမှုမိုးသည်းထန်စွာအရက်သောက် predate သောစိတ်ကူးထောက်ခံပါတယ်။ Wand နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် (FH +) နှင့်အတူငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက် nonabusing ဖို့နှင့် (FH-) မပါဘဲသွေးကြောသွင်း naloxone အုပ်ချုပ်ခွင့်ရက်တစ်မိသားစုသမိုင်းနှင့် FH + ပု FH- (နှိုင်းယှဉ်, လာမယ့် 120 မိကျော်ကြီးမားတဲ့နှင့်လျင်မြန်စွာ cortisol တုံ့ပြန်မှုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရWand et al ။ , 1998) ။ အခွားသောစမ်းသပ်မှု (ဤတွေ့ရှိချက်များ၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်ရံတုံ့ပြန်မှုကွဲပြားခြားနားမှုထွက်အုပ်ချုပ်Oswald နှင့် Wand, 2004) ။ ရှင်ဘုရင်သည်လည်းခံတွင်း naltrexone (FH- ထက် FH + အတွက်ပိုကြီးပြီးပိုကြာရှည် cortisol တုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းအစီရင်ခံထားပါတယ်ရှငျဘုရငျ et al ။ , 2002) ။ သူမ၏ FH + ဘာသာရပ်များပြန် opioid ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်သက်ရောက်မှုမှညွှန်ပြ, သန်စွမ်း၏ခံစားချက်များကိုတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောကျဆင်းမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်မိုးသည်းထန်စွာသောက်သုံးရေမရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးသမိုင်းရှိသည်သောသူ FH + အတွက် HPA ၏ပြောင်းလဲဗဟိုစည်းမျဉ်းကိုပြသ။
အထက်ပါလေ့လာမှုများအရက်သမားအတွက် attenuation HPA တုံ့ပြန်မှုကိုသူတို့မိုးသည်းထန်စွာအရက်သောက်ကျဆငျတူတဲ့ခြားနားချက်ကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သဖန်းသီး။2Wand ကတီထွင်ထားသောမော်ဒယ်တစ်ခုအနေဖြင့် opioid ထုတ်လုပ်သည့်အာရုံခံများသည် hypothalamus၊ prefrontal cortex နှင့် brainstem တွင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုအတွက်မျိုးရိုးဗီဇအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ HPA ၏တုန့်ပြန်မှုအပေါ်သြဇာသက်ရောက်ပုံကိုအကြံပြုသည်။ (1) hypothalamus ၏ arcuate နျူကလိယကနေ Opioid အာရုံခံပုံမှန်အားဖြင့် PVN ၏ CRF- အာရုံခံတားစီး, pituitary gland မှ CRF ပေးပို့တားဆီး, ACTH နှင့် cortisol လွှတ်ပေးရေးကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ Opioid ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် PVN ကိုဤ tonic ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းမှထုတ်လွှတ်ကာ cortisol ထုတ်လုပ်မှုကိုတက်စေသည်။ (2) brainstem ရှိ Opioid အာရုံခံများသည်ပုံမှန်အားဖြင့် locus ceruleus ၏ NE ထုတ်လုပ်သောဆဲလ်များကိုတားစီးသည်။ Opioid ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် locus ceruleus အားဤ inhibitory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှလွှတ်ပေးပြီး NE release သည် PVN ၏ CRF-neurons များကိုသက်ဝင်စေပြီး cortisol ထုတ်လုပ်မှုကိုထပ်မံတိုးပွားစေသည်။ (3) opioid ပိတ်ဆို့ခြင်း၏တစ် ဦး ကအလယ်တန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု prefrontal cortex အတွက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ Opioid အာရုံခံများသည်နျူကလိယနျူကလီးယားတွင် DA လွှတ်ပေးမှုကိုပုံမှန်လုပ်သည်။ Opioid ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် DA DA လွှတ်ပေးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ Wand ၏ပုံစံအရ opioid ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် HPA ဓာတ်ပြုမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ရှငျဘုရငျ et al ။ , 2002).
cortisol Secret အပေါ် opioid ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Opioid ပိတ်ဆို့ cortisol လျှို့ဝှက်ချက်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်စိတ်ဓါတ်များပြောင်းလဲပစ်ရန်ဦးနှောက်အတွက်ဆောင်ရွက်သည်။ (1) ကို hypothalamus ၏ arcuate နျူကလိယကနေ Opioid အာရုံခံပုံမှန်အားဖြင့်, အ PVN ၏အာရုံခံခြင်းဖြင့် CRF output ကိုတားစီးလျှော့ချ ...
Wand (opioid ပိတ်ဆို့ CNS အာရုံခံအပေါ်တစ်ဦးက high-ဆှဖှေဲ့ opioid အဲဒီ receptor ၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် codes တွေကိုကြောင်းကြောင့်μ-opioid receptor မျိုးရိုးဗီဇအတွက်အပြောင်းအလဲ၏ FH အတွက် သာ. ကြီးမြတ် cortisol သက်ရောက်မှု + ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအလိုငှါအဆိုတင်သွင်းOswald နှင့် Wand, 2004) ။ ဒီအယူအဆတစ်ခုစမ်းသပ်မှာတော့ high-ဆှဖှေဲ့ allele ၏တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုမိတ္တူရှိခြင်းအထီးအနိမ့်-ဆှဖှေဲ့ allele ရှိခြင်းဟာဘာသာရပ်များလုပ်ခဲ့တယ်ထက် opioid ပိတ်ဆို့ရန်နှစ်ဆပိုကြီးတဲ့ cortisol တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည် FH + တွင်တွေ့မြင် opioid ပိတ်ဆို့ဖို့ သာ. ကြီးတုန့်ပြန်များအတွက်ယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ယန္တရားကိုထောက်ပံ့ပေး, ထိုသို့အရက်သမားပြန်လည်ထူထောင်များ၌တွေ့မြင်တုံးစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဒီမော်ဒယ်ဟာ opiate ပိတ်ဆို့လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များကိုများအတွက် mechanistic မူဘောင်ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သော်လည်း, high-ဆှဖှေဲ့ allele တစ် differential ကိုပျံ့နှံ့သေး FH + ပုဂ္ဂိုလ်များ၌တည်သည်မဟုတ်။ ဒါကြောင့်လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် testable ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လူ့ HPA တုံ့ပြန်မှု, dopamine ယန္တရားများနှင့်စွဲမှမျိုးဗီဇလွယ်ကူစွာထိခိုက်အတွက်မူကွဲသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့် opioid မော်ဒယ်ဆွဲဆောင်နေသည်။
7 ။ စွဲလမ်းများအတွက်အန္တရာယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပြောင်းလဲ HPA စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကို
အရက်ဘိုးဘေးတို့နှင့်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက် opioid ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမှ HPA တုံ့ပြန်မှုချဲ့ကားပြောဆိုမှုများရှိသည်ဟုသောတွေ့ရှိချက်သူတို့ nonpharmacologic လှုံ့ဆော်မှုမှ differential ကိုတုံ့ပြန်ရှိမရှိ၏မေးစရာများရှိနေပါသည်။ အများအပြားကလေ့လာမှုများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုမြီးကောင်ပေါက်နှင့်သူ၏မိဘများအရက်တစ်သမိုင်းရှိတယ်ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေဖြစ်ကြောင်းပြသပါ။ မော့စ်, Vanyukov နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (သူတို့၏ဘိုးဘေးတို့အရက်သမားခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးစွဲခဲ့ကြသည် 10 နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးများထံသို့ 12- အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုမှ cortisol တုံ့ပြန်မှုကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြမော့စ် et al ။ , 1995, 1999) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေမှာဘာသာရပ်များဦးရေပြားလျှပ်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောပစ္စည်းကိရိယာများမှပူးတွဲမှု၏လျှောက်လွှာအဘို့အခေါ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related-အလားအလာလေ့လာမှုကိုခံယူဖို့ဆေးရုံဝင်ကြ၏။ စာရေးသူအညီတစ်ဦးအနည်းငယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလှုံ့ဆျောဖိအားအတိုင်းဤရှုမြင်ကြသည်။ သူတို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမီနှင့်အပြီးကောက်ယူတံတွေးကနေ cortisol နမူနာ။ အဆိုပါစာရေးဆရာတစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်-based, anticipatory စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမတိုင်မီ cortisol တစ်ဦးမြင့်ဘတ်ပါ၏။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပြီး cortisol အတွက်ကျဆင်းမှုစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏အရွယ်အစားညွှန်ပြရန်အသုံးပြုထားတဲ့ unstressed အခြေခံဖို့ပြန်လာအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ FH + ယောက်ျားလေးများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမတိုင်မီ cortisol တစ်အောက်ပိုင်းအဆင့်နှင့်အဆိုပါ FH- အုပ်စုဆွေမျိုးနောက်မှ cortisol အတွက် attenuation ကျဆင်းမှု, ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါယောက်ျားလေးနှင့်အတူအလုပ်နောက်ကလိုက်သည့်ယောက်ျားလေးများ (မသက်ဆိုင် FH အမျိုးအစား၏, အသက် 15 မှ 16 သောအခါ attenuation cortisol တုံ့ပြန်မှုစီးကရက်နှင့်ဆေးခြောက်နှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်တွေနဲ့ဆက်နွယ်ခဲ့ကြကြောင်းပြသမော့စ် et al ။ , 1999).
ဒါကသက်သေအထောက်အထား cortisol တုံ့ပြန်မှုအတွက်နောက်ဆက်တွဲလျှော့ချနှင့်အတူပတ်ဝန်းကျင်ကနေအလားအလာခြိမ်းခြောက်မှုများမှပြောင်းလဲ CNS တုံ့ပြန်မှုမှ predisposing အချက်တစ်ခုအဖြစ်ဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုတစ်မိသားစုသမိုင်း implicates ။ ဤရွေ့ကားစာရေးသူလည်းတစ်ဦးစိတ်ဖိစီးမှု hyporeactivity ၏နောက်ထပ်ခန့်မှန်းအဖြစ်ဖခင်နှင့်သားအတွက် antisocial အပြုအမူ ဆက်စပ်. အ။ အကငျြ့ရောဂါပိုပြီးရောဂါလက္ခဏာနှင့်အတူယောက်ျားလေးများနှင့်သူ၏ဘိုးဘေးတို့သ antisocial ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါပိုပြီးရောဂါလက္ခဏာတွေပြသ correspondingly cortisol ပမာဏနှင့်တုန့်ပြန်မှုကိုလျှော့ချခဲ့ (Vanyukov et al ။ , 1993), နှင့်ကိုသူတို့အနာဂတ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ၏ဟောကိန်းထုတ်အန္တရာယ်မြင့်မားအဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့ (Dawes et al ။ , 1999) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကအလားအလာခြိမ်းခြောက်မှုများအပေါ်တုံ့ပြန်သည့်ချို့တဲ့ညွှန်ပြနှင့်သူတို့တစ်တွေပံ့ပိုးဝိသေသအဖြစ် antisocial သဘောထားတွေ၏ရှေ့မှောက်တွင် ဆက်စပ်. အ။ Antisocial သဘောထားတွေကိုပုံမှန်အားဖြင့် evocative ဖြစ်ရပ်များမှလျှော့စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှု၏အရိပ်အယောင်များမှာသူတို့ဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်အတူလိုက်ပါမကြာခဏ, သူတို့ (ကလူသိများအမွေဆက်ခံအခြေခံများLangbehn et al ။ , 2003).
အများပြည်သူစကားပြောများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲတုံ့ပြန် vs. opioid ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမှတစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ် HPA Response (Oswald et al ။ , 2004) ။ နှစ်ဦးကတွေ့ရှိချက်များထွက်ရပ်နေ၏။ ပထမဦးစွာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆက်စပ်မှုဖေါ်ပြခြင်း, အလားတူနှစ်ဦးစလုံးစိန်ခေါ်မှုများပိုမိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းတုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည် rACTH တုံ့ပြန် = .57 သည်မတူညီသောစိန်ခေါ်မှုများရှိနေသော်လည်းခိုင်မာတဲ့တစ်ဦးချင်းစီ-ခြားနားချက်သဘောထားတွေကိုညွှန်ပြ။ ဒုတိယအချက်မှာအသစ်အဆန်းရှာ၏ဝိသေသဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီးဒီတည်ငြိမ်ခြားနားချက်ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ အသစ်အဆန်းရှာ (အချို့လေ့လာမှုများအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ disinhibition တစ်အတိုင်းအတာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ပုံတူပွားခြင်း, 1987) ။ သို့သော်ဤအမှု၌, အသစ်အဆန်းရှာအတွင်းပိုမိုမြင့်မားသောပုဂ္ဂိုလ်များပိုမိုလျော့နည်းမဟုတ်, ဒီရိုထဲမှာအနိမ့်ရှိသူများထက်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်အန္တရာယ်အုပ်စုများ cortisol တုံ့ပြန်ကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ ဤသည် ACTH နဲ့ Cortisol နှစ်ဦးစလုံးထိုကဲ့သို့လေ့လာမှုများအတွက်လာသောအခါဖြစ်နိုင်နမူနာများနှင့် externalizing သဘောထားတွေဇီဝဗေဒနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများမှနှစ်ဦးစလုံးမှပြောင်းလဲ Response ကြိုတင်ခန့်မှန်းစေခြင်းငှါသင့်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်အဆိုပါရောဂါအတှကျမိသားစုအန္တရာယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ထပ်မံစမ်းသပ်ပြီးရပါမည်။
(ဒီအထူးပြဿနာအစီရင်ခံအလုပ်တှငျကြှနျုပျတို့အရက်မိဘများ၏ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုလေ့လာကြနှင့် Lab ထဲမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားသူတို့ကိုမပြုလုပ်ရပါSorocco et al ။ , 2006) ။ ဤရွေ့ကားဘာသာရပ်များမော့စ်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့်ဘာသာရပ်များထက်အသက်ကြီး ရှိ. , သူတို့တစ်တွေကောင်းစွာ-defined Basal cortisol Secret ပုံစံရရှိရန်စိတ်ဖိစီးမှု၏တစ်ရက်နှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောတစ်နေ့နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဘာသာရပ်များကယ်လီဖိုးနီးယားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Inventory ၏လူပေါင်းကောင်းသောစကေး ( အသုံးပြု. antisocial သဘောထားတွေကိုရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်Gough, 1994; Kosson et al ။ , 1994) ။ လူပေါင်းကောင်းသောအတွက် FH + နှင့်အနိမ့်သောအဖွဲ့ခွဲတစ်ခုသိသိသာသာ attenuation စိတ်ဖိစီးမှု cortisol တုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အလုပ်နှင့်အတူကျယ်ပြန့်သဘောတူညီမှု၌ရှိကြ၏။ အမှတ်နှစ်ခုဖော်ပြထားခြင်းထိုက်။ နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများအတွက် cortisol Response အတွက်လျော့ချရေး၏အများစုမှာ (1) က FH + အုပ်စုများ၏ antisocial ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပုံရသည်။ (2) ကနောက်ကလိုက်လေ့လာမှု cortisol သူ့ဟာသူနီကိုတင်းနှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုအင်အားအကောင်းဆုံးခန့်မှန်း (ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့မော့စ် et al ။ , 1999).
8 ။ အကျဉ်းချုပ်
ကအတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်များစွာသောအမူအကျင့်ပြည်နယ်များ (စပ်လျဉ်း noninvasively နမူနာစေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်တံတွေးတိုင်းတာ cortisol လူ့လေ့လာမှုများအဘို့စံပြဖြစ်Kirschbaum နှင့် Hellhammer, 1989) ။ အဆိုပါ HPA မိသားစုအန္တရာယ်သို့မဟုတ်ရှိပြီးသားစွဲစပ်လျဉ်းဆနျးစစျဖို့အရေးပါသောစနစ်ဖြစ်သည်။ Wand မှတ်ချက်ပြုအဖြစ်, ( "HPA ဝင်ရိုးဟော်မုန်းများလွှတ်ပေးရန်လေ့လာ CNS function ကိုအပေါ်တစ်ဦးဝင်းဒိုးကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်အရက်၏နှစ်ဦးစလုံးအရက်နှင့်မိသားစုသမိုင်းတစ် function ကိုအဖြစ် neurotransmitter စနစ်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုလှန်နိုင်"Oswald နှင့် Wand, 2004).
မိသားစုပြသနာများအရအရက်သောက်ခြင်းနှင့်အခြားပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုပုံစံသည်စွဲလမ်းစေသောရောဂါအတွက်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအန္တရာယ်ရှိသူများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားပုံရသည်။ အမွေဆက်ခံထားသောစွန့်စားရမှုမှာ ဦး နှောက်စနစ်များကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ပုံမှန် cortisol တုန့်ပြန်မှုအားပုံမှန်ပုံမှန်ခြိမ်းခြောက်မှုများအားတုံ့ပြန်သူများသည်အနာဂတ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်နှင့်အတူအန္တရာယ်ရှိသောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်နိုင်သူများအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေသောစိတ်ဖိစီးမှု cortisol ၏တုန့်ပြန်မှုသည်လူမှုရေးလက္ခဏာများရှိသည့်လူများတွင်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ချေရှိပုံရခြင်းသည် ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်စနစ်များကိုအမွေဆက်ခံမည့်စွန့်စားမှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ Cortisol ထုတ်လုပ်မှုသည်တုန့်ပြန်မှုတိုင်းတာမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ ဦး နှောက်စနစ်များအားထိရောက်သောတုံ့ပြန်မှုအရင်းအမြစ်လည်းဖြစ်သည်။ ဤတုံ့ပြန်ချက်သည် prefrontal cortex နှင့် limbic system ၏ရေရှည်တုန့်ပြန်မှုကိုပြုပြင်နိုင်သည်။ cortisol ၏စွဲလမ်းမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုအတွက်တုန့်ပြန်မှုအခန်းကဏ္ of များ၏ပါဝင်မှုသည်မဆုံးဖြတ်ရသေးပါ။
သုတေသနအရင်းအမြစ်များ, Bethesda အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် Center ကအမေရိကန်နိုင်ငံ, MD ။ AA12207 နှင့် M01 RR14467 ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes, အမျိုးသား Institute မှအရက်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက်အပေါ်အမေရိကန်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်စစ်ပြန်ရေးရာအမေရိကန်ဦးစီးဌာနနှင့် Grant ကအမှတ်ကထောက်ခံ၏။
Adinoff B, ခြောက်လအမျိုးသားများတွင်အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း functioning hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏ Risher-ပန်းပွင့်ဃနှောင့်အယှက်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1991; 148: 1023-1025 ။ [PubMed]
Adinoff B, Krebaum SR, Chandler PA ဆိုပြီးရဲ W က, ဘရောင်းကို MB, Williams က MJ ။ အပိုင်း 1: 1 လ abstinent အရက်-မှီခိုယောက်ျားအတွက် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးရောဂါဗေဒ၏ခှဲစိတျ။ Adrenocortical နှင့် pituitary glucocorticoid တုန့်ပြန်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005a; 29: 517-527 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Adinoff B, Krebaum SR, Chandler PA ဆိုပြီးရဲ W က, ဘရောင်းကို MB, Williams က MJ ။ အပိုင်း 1:2လ abstinent အရက်-မှီခိုယောက်ျားအတွက် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးရောဂါဗေဒ၏ခှဲစိတျ။ ovine corticotropin-releasing အချက်နှင့် naloxone မှတုန့်ပြန်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005b; 29: 528-537 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
al'Absi M. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းပြန်လည်ဖြစ်ပွားခြင်းအတွက်အန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ int J ကို Psychophysiol ။ ၂၀၀၆; ၅၈PubMed]
Amar DG, စျေး JL, Pitkanen တစ်ဦးက, Carmichael ST ။ အဆိုပါမျောက် amygdaloid ရှုပ်ထွေးသော၏ခန္ဓာဗေဒအဖွဲ့အစည်းက။ ခုနှစ်တွင်: Aggleton JP, အယ်ဒီတာ။ အဆိုပါ Amygdala: Neurobiological Emotion ၏ရှုထောင့်, မှတ်ဉာဏ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်, Edn ။ Wiley-Liss, Inc မှ .; နယူးယောက်: 1992 ။ စစ။ 1-66 ။
American_Psychiatric_Association ။ diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ, Ed က။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး; ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 1994 ။
ဘာနာဒီ NC ဘုရင် AC အ, Parsons oa, Lovallo WR ။ သမ္မာသတိရှိကြလော့အရက်သမားအတွက်ပြောင်းလဲ cortisol တုံ့ပြန်မှု: ပံ့ပိုးအချက်များတစ်ခုစာမေးပွဲ။ အရက်။ 1996; 13: 493-498 ။ [PubMed]
Bradbury MJ, Akana SF, Dallman MF ။ ပေါင်းစပ်အဲဒီ receptor သိမ်းပိုက်တဲ့ nonadditive အကျိုးသက်ရောက်မှုဘို့သက်သေအထောက်အထား: အ diurnal ကျင်းနှင့်အထွတ်အထိပ်စဉ်အတွင်း hypothalamo-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးထဲမှာ Basal လှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် type ကိုငါနှင့် II ကို corticosteroid receptors ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 1994; 134: 1286-1296 ။ [PubMed]
Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Knapp DJ သမား, Overstreet DH ။ CRF-1 နှင့် benzodiazepine အဲဒီ receptor ရန်အားဖြင့်တားစီးနှင့် 5-HT1A-receptor agonist: လူမှုရေးအပြန်အလှန်ထဲမှာအီသနောဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်လျှော့ချရေး၏စိတ်ဖိစီးမှုာင်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29: 470-482 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Broadbear JH, တောင်ပံကစားသမား, G, ဝုဒ် JH ။ fentanyl, ကိုကင်းနှင့်အ ketamine ၏ self-အုပ်ချုပ်ရေး: မျောက်တွေကိုအတွက် pituitary-adrenal ဝင်ရိုးအပေါ်သက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (ဘာလင်) 2004; 176: 398-406 ။ [PubMed]
ဘန်း L ကို, Teesson အမ်အရက်စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းမမှန်မှုများနှင့်အတူ comorbid မမှန်ကိုအသုံးပြုပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ကောင်းပြီဖြစ်ခြင်း၏သြစတြေးလျအမျိုးသားစစ်တမ်းကနေတွေ့ရှိချက်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2002; 68: 299-307 ။ [PubMed]
Carboni အီး, Silvagni တစ်ဦးက, Rolando MT, မူးယစ်ဆေးဝါးအားဖြည့်ခြင်းဖြင့် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယ၌ Vivo dopamine ဂီယာ၏ Di Chiara G. အစိတ်ကြွဆေး။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: RC102 ။ [PubMed]
ပုံတူပွားခြင်း CR, Bohman M က, အရက်အလွဲသုံးစားမှု Sigvardsson အက်စ်အမှေဥစ်: မွေးစားယောက်ျား၏မြှင့်တင်ရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကူး။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1981; 38: 861-868 ။ [PubMed]
Czeisler, CA, èdè MC, Regestein QR, Kisch ES, ဖန် VS, Ehrlich မာခ်။ Elective နှလုံးခွဲစိတ်မှုစောင့်ဆိုင်းလူနာ Episode 24 နာရီ cortisol အတွင်းသို့ပုံစံများ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 1976; 42: 273-283 ။ [PubMed]
Dawes M က, Clark က D:, မော့စ် H ကို, Kirisci L ကို, Tarter R. မိသားစုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်အန္တရာယ်မှာယောက်ျားလေးများအတွက်အမူအကျင့် Self-စည်းမျဉ်း၏သက်တူရွယ်တူ Correlate ။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 1999; 25: 219-237 ။ [PubMed]
de Kloet ER, Reul JM ။ တုံ့ပြန်ချက်အရေးယူမှုနှင့်ဦးနှောက် function ကိုအပေါ် corticosteroids ၏လုပ်သူများသြဇာလွှမ်းမိုးမှု: ဦးနှောက်ကိုအဲဒီ receptor စနစ်များ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောရာမှပေါ်ထွက်လာသောတစ်ဦးအယူအဆ။ Psychoneuroendocrinology ။ 1987; 12: 83-105 ။ [PubMed]
Deroche-Gamonet V ကို, Sillaber ငါ Aouizerate B, Izawa R ကို, Jaber M က, Ghozland S က, Kellendonk ကို C, Le Moal က M, Spanagel R ကို, Schutz, G, Tronche က F, Piazza PV ။ ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုလျှော့ချဖို့အလားအလာပစ်မှတ်အဖြစ် glucocorticoid အဲဒီ receptor ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 4785-4790 ။ [PubMed]
Elman ငါလောနိတျမွို့ SE, Karlsgodt KH, Gasic မိသားစုဆရာဝန်, Breiter HC ။ acute cortisol အုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်းမှီခိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်တဏှာအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Psychopharmacol Bull ။ 2003; 37: 84-89 ။ [PubMed]
Errico AL, Parsons oa ဘုရင် AC အ, Lovallo WR ။ သမ္မာသတိရှိကြလော့အရက်သမားအတွက် biobehavioral ဖိအား cortisol တုံ့ပြန်မှု attenuation ။ J ကိုလုံးအရက်။ 1993; 54: 393-398 ။ [PubMed]
Figueiredo HF, Bruestle တစ်ဦးက, ခန္ဓာကိုယ် B, Dolgas CM, Herman JP ။ အဆိုပါ medial prefrontal cortex differential စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် c- ထိန်းညှိfos ဖိအားအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. အဆိုပါ forebrain အတွက်စကားရပ်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2003; 18: 2357-2364 ။ [PubMed]
Gerra, G, Baldaro B, Zaimovic တစ်ဦးက, Moi, G, Bussandri M က, Raggi MA, Brambilla အက်ဖ် Neuroendocrine abstinent opioid-မှီခိုဘာသာရပ်များအကြားတွင်စမ်းသပ်မှုတွေအ-သွေးဆောင်စိတ်ခံစားမှုမှတုံ့ပြန်မှု။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2003a; 71: 25-35 ။ [PubMed]
Gerra, G, Bassignana S က, Zaimovic တစ်ဦးက, Moi, G, Bussandri M က, Caccavari R ကို, Brambilla က F, 3,4-methylenedioxy-စိတ်ကြွဆေး ( 'ecstasy') သမိုင်းကိုသုံးပါနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ဖိစီးမှုမှ Molina အီး Hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှု: ဆက်စပ်မှု dopamine အဲဒီ receptor sensitivity ကိုအတူ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2003b; 120: 115-124 ။ [PubMed]
Gerra, G, Zaimovic တစ်ဦးက, Moi, G, Bussandri M က, Bubici ကို C, Mossini M က, Raggi MA, Brambilla အက်ဖ် abstinent ဘိန်းဖြူစွဲအတွက်တုံ့ပြန်ရန်လို: neuroendocrine နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆက်နွယ်နေပါသည်။ prog Neuro-Psychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 28: 129-139 ။ [PubMed]
Gough အိပ်ချ်သီအိုရီ, ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်, CPI ကလူမှုဆက်ဆံရေးစကေး၏အနက်ကို။ Psychol ကိုယ်စားလှယ် 1994; 75 ။ 651-700 ။ [PubMed]
လူ့သိမှတ်ခံစားမှု၏ဆက်စပ်အတွင်း amygdala ၏ Halgren အီးစိတ်ခံစားမှု neurophysiology ။ ခုနှစ်တွင်: Aggleton JP, အယ်ဒီတာ။ အဆိုပါ Amygdala: Neurobiological Emotion ၏ရှုထောင့်, မှတ်ဉာဏ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်, Edn ။ Wiley-Liss; နယူးယောက်: 1992 ။ စစ။ 191-228 ။
Harris က GC, အ opiate ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် D2 dopamine receptors ၏ Aston-ဂျုံးစ် G. အပါဝင်ပတ်သက်မှု။ သဘာဝ။ 1994; 371: 155-157 ။ [PubMed]
Herman JP, Figueiredo H ကို, Mueller NK, Ulrich-လိုင် Y ကို, Ostrander MM, Choi, DC, Cullinan WE ။ စိတ်ဖိစီးမှုပေါင်းစည်းမှု၏ဗဟိုယန္တရားများ: hierarchical circuitry hypothalamo-pituitary-adrenocortical တုန့်ပြန်ထိန်းချုပ်။ တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ 2003; 24: 151-180 ။ [PubMed]
Iranmanesh တစ်ဦးက, Veldhuis JD, ဂျွန်ဆင် ML, Lizarralde G. အ 24 နာရီ pulsatile နှင့်အရက်လူ cortisol Secret ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian ပုံစံများ။ J ကို Androl ။ 1989; 10: 54-63 ။ [PubMed]
Junghanns K ကို Backhaus J ကို, Tietz ဦး, Lang W က, Bernzen J ကို, Wetterling T က, ကိတ်ကွင်း L ကို, Driessen အမ်ချို့တဲ့ခြင်းသွေးရည်ကြည် cortisol စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအစောပိုင်း relapse တစ်ဦးခန့်မှန်းသည်။ အရက်အရက်။ 2003; 38: 189-193 ။ [PubMed]
Junghanns K ကို Tietz ဦး, Dibbelt L ကို, Kuether M က, Jurth R ကို, Ehrenthal: D, Blank က S နဲ့, cue ထိတွေ့မှုအောက်တွင် Backhaus ဂျေ attenuation တံထွေး cortisol Secret အစောပိုင်း relapse နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အရက်အရက်။ 2005; 40: 80-85 ။ [PubMed]
ရှငျဘုရငျ, AC, Schluger J ကို, Gunduz M က, Borg L ကို, Perret, G, ဟိုတစ်ဦးက, Kreek MJ ။ ပါးစပ် naltrexone ၏ Hypothalamic-pituitary-adrenocortical (HPA) ဝင်ရိုးတုံ့ပြန်မှုများနှင့် biotransformation: အရက်၏မိသားစုသမိုင်းမှဆက်ဆံရေးပဏာမစာမေးပွဲ။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 26: 778-788 ။ [PubMed]
Kirschbaum ကို C, Hellhammer DH ။ psychobiological သုတေသနအတွက်တံထွေး cortisol: ခြုံငုံသုံးသပ်။ Neuropsychobiology ။ 1989; 22: 150-169 ။ [PubMed]
Koob gf ။ အရက်: allostasis နှင့်ကျော်လွန်ပြီး။ အရက် Clin Exp Res ။ 2003; 27: 232-243 ။ [PubMed]
Koob gf, Rassnick S က, Heinrich S က, Weiss အက်ဖ်အရက်, အကျိုးကိုစနစ်နှင့်မှီခို။ EXS ။ 1994; 71: 103-114 ။ [PubMed]
Kosson DS, Steuerwald BL, Newman က JP, Widom CS ။ ကောလိပ်ကျောင်းသားများတွင်လူမှုရေးနှင့် antisocial အပြုအမူ, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်မိသားစုပဋိပက္ခအကြားစပ်လျဉ်း။ J ကို Pers အကဲဖြတ်။ 1994; 63: 473-488 ။ [PubMed]
Langbehn DR, Cadoret RJ, Caspers K ကို Troughton EP, Yucuis R. မျိုးဗီဇနှင့်မွေးစားခံရသောကလေးများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများနှင့်ပြဿနာများကိုစတင်ခြင်းများအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်အချက်များ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2003; 69: 151-167 ။ [PubMed]
လာဇရုကို RS, Folkman အက်စ်စိတ်ဖိစီးမှု, စိစစ်ရေးနှင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်, Ed က။ Springer; နယူးယောက်: 1984 ။
LeDoux je ။ ဦးနှောက်ထဲမှာစိတ်ခံစားမှုမှတ်ဥာဏ်စနစ်တွေ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1993; 58: 69-79 ။ [PubMed]
Linkowski P ကို, ဗန် Onderbergen တစ်ဦးက, Kerkhofs M က, Bosson: D, Mendlewicz J ကို, အ 24-ဇ cortisol ပရိုဖိုင်း၏ဗန် Cauter အီးအမွှာလေ့လာမှု: လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian နာရီ၏မျိုးဗီဇကိုထိန်းချုပ်ဘို့သက်သေသာဓက။ နံနက် J ကို Physiol ။ 1993; 264: E173-E181 ။ [PubMed]
Lovallo WR, Gerin ဒဗလျူ Psychophysiological reactivity ကို: နှလုံးသွေးကြောရောဂါယန္တရားများနှင့်လမ်းကြောင်း။ Psychosom Med ။ 2003; 65: 36-45 ။ [PubMed]
Lovallo WR, သောမတ်စ် TL ။ psychophysiological သုတေသနအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်း: စိတ်ခံစားမှုအမူအကျင့်များနှင့်သိမြင်မှုဂယက်။ ခုနှစ်တွင်: Cacioppo JT, Tassinary LG က, Berntson, G, အယ်ဒီတာများ။ Psychophysiology ၏လက်စွဲစာအုပ်။ 2nd ။ ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 2000 ။ စစ။ 342-367 ။
Lovallo WR, Dickensheets SL, Myers: D, နစ်ဆင် SJ ။ abstinent အရက်နှင့် polysubstance အလွဲသုံးစားလုပ်လူတုံးစိတ်ဖိစီးမှု cortisol တုံ့ပြန်မှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 2000; 24: 651-658 ။ [PubMed]
Margraf HW, Moyer, CA, Ashford LE, Laval LW ။ အရက်သမားအတွက် Adrenocortical function ကို။ J ကိုမြင့်တက် Res ။ 1967; 7: 55-62 ။ [PubMed]
McEwen BS, Weiss JM, Schwartz LS ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ limbic အဆောက်အဦများအားဖြင့် corticosterone ၏ရွေးချယ် retention ကို။ သဘာဝ။ 1968; 220: 911-912 ။ [PubMed]
Mendelson JH, Stein က S, McGuire MT ။ စမ်းသပ်မှုတွေအသွေးဆောင်အီသနောမူးယစ်လျှက်အရက်နှင့် nonalcoholic ဘာသာရပ်များ၏နှိုင်းယှဉ် psychophysiological လေ့လာမှုများ။ Psychosom Med ။ 1966; 28: 1-12 ။ [PubMed]
Mendelson JH, Ogata M က, Mello NK ။ Adrenal function ကိုနှင့်အရက်: ဗြဲ Serum cortisol ။ Psychosom Med ။ 1971; 33: 145-157 ။ [PubMed]
မော့စ် HB, Vanukov MM မာတင် CS ။ cortisol တုံ့ပြန်မှုများနှင့် prepubertal ယောက်ျားလေးများအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်အန္တရာယ် Salivary ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1995; 38: 547-555 ။ [PubMed]
မော့စ် HB, Vanyukov M က, Yao အဘိဓါန် JK, Kirillova မိသားစုဆရာဝန်။ prepubertal ယောက်ျားလေးများအတွက်တံထွေး cortisol တုံ့ပြန်မှု: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြုအမူနှင့်အတူမိဘပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဖွဲ့စည်းများ၏သက်ရောက်မှုများ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 45: 1293-1299 ။ [PubMed]
Munro, CA, Oswald LM, Weerts EM, McCaul ME, Wand GS ။ abstinent အရက်-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက်လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အရက်မှီခိုမရှိသမိုင်းနှင့်အတူလူမှုရေးသောက်မှဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 2005; 29: 1133-1138 ။ [PubMed]
Oswald LM, Wand GS ။ Opioids နှင့်အရက်။ Physiol ပြုမူနေ။ 2004; 81: 339-358 ။ [PubMed]
Oswald LM, Mathena JR, Wand GS ။ naloxone vs. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးတွေစိတ်ဖိစီးမှုမှဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှုဝင်ရိုး HPA ၏နှိုင်းယှဉ်။ Psychoneuroendocrinology ။ 2004; 29: 371-388 ။ [PubMed]
Pacak K ကို Palkovits M က, Kopin IJ, စတိန်း DS ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အဆိုပါ hypothalamic paraventricular နျူကလိယနှင့် pituitary-adrenocortical အတွက် norepinephrine လွှတ်ပေးရန်နှင့် sympathoadrenal လှုပ်ရှားမှု: Vivo microdialysis လေ့လာမှုများ၌တည်၏။ တပ်ဦး Neuroendocrinol ။ 1995; 16: 89-150 ။ [PubMed]
Petrusz P ကို, Merchenthaler ဗြဲအဆိုပါ corticotropin-releasing အချက်စနစ်။ ခုနှစ်တွင်: Nemeroff သမဝါယမ, အယ်ဒီတာ။ Neuroendocrinology ။ 1st ။ စီအာစီစာနယ်ဇင်း; Boca Raton, FL: 1992 ။ စစ။ 129-183 ။
Piazza PV, Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 1998; 19: 67-74 ။ [PubMed]
Rivier C. အရက်ကြွက်များတွင် ACTH လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်: လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရားများနှင့်အခြားလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူ interaction က။ အရက် Clin Exp Res ။ 1996; 20: 240-254 ။ [PubMed]
Rivier ကို C, Bruhn T က, အီသနော၏ခြိုငျ့ဒဗလျူ Effect အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးပေါ်တွင်ကြွက်များတွင်: corticotropin-releasing အချက် (CRF) J ကို Pharmacol Exp Ther ၏အခန်းကဏ္ဍ။ 1984; 229: 127-131 ။ [PubMed]
Rodriguez က de Fonseca က F, Carrera MR, Navarro M က, Koob gf, cannabinoid ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း limbic စနစ် corticotropin-releasing အချက်၏ Weiss အက်ဖ် Activation ။ သိပ္ပံ။ 1997; 276: 2050-2054 ။ [PubMed]
Rolls ET, Stringer သည် SM ။ ခံစားချက်နှင့်မှတ်ဉာဏ်အကြားအပြန်အလှန်၏တစ်ဦးကမော်ဒယ်။ Network မှ။ 2001; 12: 89-109 ။ [PubMed]
Sanchez MM, Young က LJ, Plotsky pm တွင်, Insel TR ။ အဆိုပါစမ်းသပ်တာမျိုးကဦးနှောက်ထဲမှာ corticosteroid receptors ၏ဖြန့်ဖြူး: အ hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် glucocorticoid receptors ၏ဆွေမျိုးမရှိခြင်း။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 4657-4668 ။ [PubMed]
ဒဏ်ရာနှင့်မူးယစ်ရန်သက်ရှိများ၏တုံ့ပြန်မှုအတွက် Selye အိပ်ချ် Thymus နှင့် adrenals ။ br J ကို Exp Pathol ။ 1936; 17: 234-248 ။
Sinha R ကို, ဖျူး T က, Aubin LR, O'Malley အက်စ်အက်စ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သောအချက်များနှင့်ကိုကင်းတပ်မက်ခြင်း။ psychopharmacology (ဘာလင်) 2000; 152: 140-148 ။ [PubMed]
Sorocco KH, Lovallo WR, ဗင်းဆင့် AS, Collins က FL ။ အရက်တစ်မိသားစုသမိုင်းနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုမှ hypothalamic-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုး Response ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ။ int J ကို Psychophysiol ။ 2006; 58 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Steptoe တစ်ဦးက, Ussher အမ်ဆေးလိပ်, cortisol နှင့်နီကိုတင်း။ int J ကို Psychophysiol ။ 2006; 58 [PubMed]
Tapert SF, Baratta သင်္ဘော MV, Abrantes လေး, Brown က SA ။ အာရုံစူးစိုက်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှုအသိုင်းအဝိုင်းလူငယ်အချို့အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာပါဝင်ပတ်သက်မှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ J ကို Am Acad ကလေးမြီးကောင်ပေါက် psyche ။ 2002; 41: 680-686 ။ [PubMed]
ဗန် Cauter အီး, Shapiro ET, Tillil H ကို, Polonsky KS ။ အစားအစာမှဂလူးကို့စများနှင့်အင်ဆူလင်တုံ့ပြန်မှု၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian မော်ဂျူ: cortisol ရစ်သမ်မှဆက်ဆံရေးမျိုး။ နံနက် J ကို Physiol ။ 1992; 262: E467-E475 ။ [PubMed]
Vanyukov MM, မော့စ် HB, Plail ဂျာ Blackson T က, Mezzich AC အ, Tarter RE ။ preadolescent ယောက်ျားလေးများအတွက်နှင့်၎င်းတို့၏မိဘများအတွက် Antisocial လက္ခဏာတွေ: cortisol နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့များ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 1993; 46: 9-17 ။ [PubMed]
Wand GS, Dobs AS ။ တက်တက်ကြွကြွမသောက်အရက်သမားအတွက် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးအတွင်း ALTER ။ J ကို Clin Endocrinol Metab ။ 1991; 72: 1290-1295 ။ [PubMed]
Wand GS, Mangold: D, အယ်လ် Deiry S က, McCaul ME, အရက်နှင့် hypothalamic opioidergic လှုပ်ရှားမှုဟူးဗားဃမိသားစုသမိုင်း။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 55: 1114-1119 ။ [PubMed]